Etu esi eji ulo | Ota Ward Hall Aplico
<Kpachara anya> Maka ime ụlọ ndị ejiri akara * mara, agbanweela usoro lọtrị iji gbochie ọrịa nje coronavirus ọhụrụ.
Zọ lọtrị Daejeon Citizen's Plaza Soro na lọtrị n'otu obere ụlọ nzukọ.
* Ebe lọtrị ahụ ga-abụ Ota Citizen's Plaza.
Ota Ward Hall Hall, ọ bụghị ebe dị icheBiko mara na ọ ga-adị.
Usoro oge Anabatara nnabata na Ota Ward Plaza Small Hall site na 1: 20 pm ruo 2: XNUMX pm n'ụbọchị lọtrị.
(Lottery bidoro na 2:XNUMX pm) Anabatara nnabata na Ota Ward Plaza Small Hall site n’elekere 9:20 nke ụtụtụ ruo elekere 10:XNUMX nke ụtụtụ n’ụbọchị lọtrị.
(Nza amalite na 10 nke ụtụtụ) Bido n’abalị iri na ise rue na ngwụcha ọnwa, ọnwa anọ tupu ọnwa eji, tinye na Uguisu Net, Ota Ward Hall Aplico, ma ọ bụ windo ọgbakọ nzukọ Ọta Ward.
Ojiji ojiji / oge ugwo Site na ubochi larịị ruo ụbọchị iri abụọ nke otu ọnwa ahụ
Ebe nnabata ngwa / oge nnabata Ota Ward Halllọ Nzukọ Aplico
(Kwa ụbọchị ma e wezụga ụbọchị emechi) Lic Ota Ward Halllọ Nzukọ Aplico
9: 7 rue XNUMX: XNUMXpm (ụbọchị ọ bụla ma e wezụga ụbọchị emechi)
・ Facilitylọ ọ bụla dị na ngalaba: 9:7 ụtụtụ ruo XNUMX:XNUMX elekere
Ojiji ojiji / oge ugwo Biko kwụọ ụgwọ n'oge ngwà. 1. Ọ bụrụ na ị tinye ntanetị, biko kwụọ ụgwọ n'ime ụbọchị 14 site na ụbọchị nke ngwa ahụ.
2. Ọ bụrụ na ị tinyere na tebulu, biko kwụọ ụgwọ n'oge ngwà. * Ọ bụrụ n ’itinye ụbọchị abụọ tupu ụbọchị eji ya n’ụbọchị eji eme ihe, naanị Ota Ward Hall Hall bụ Aplico ga-adị.